Zeorzia: Hetsiky ny blaogera mba hanohanana ireo IDP voaroaka · Global Voices teny Malagasy
Zeorzia: Hetsiky ny blaogera mba hanohanana ireo IDP voaroaka
Voadika ny 01 Aogositra 2018 12:17 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2011 – Ny IDP dia ireo olona izay nafindra toerana tao anatin'ny fireneny ihany)
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Feon'ny Fifandirana ao Kaokazy ity lahatsoratra ity.
Efatra volana lasa izay, tamin'ny 11 Oktobra 2010, nanomboka nanohitra ny tsy firaharahian'ny fanjakana azy ireo olona nafindra toerana tao anatin'ny firenena (IDP) noho ny fitsoahana ny ady tany amin'ny faritra separatista ao Abkhazia sy Ossetia Atsimo. Nmena tranolay teo an-tokotanin'ny lapan'ny Ministeran'ny Olona Nafindra Toerana avy any amin'ireo faritany Voabodo, Fampiantranoana sy ireo Mpitsoaponenana avy any Zeorzia, maro ireo olona nafindra toerana no mangataka ny fanjakana mba hanajanona ireo fandroahana, izay hatreto dia nahitana fianakaviana mihoatra ny 80 nesorina tamin'ny tranony vonjimaika, ka hanome azy ireo trano ipetrahana.
Na izany aza, tsy nisy manampahefana tonga niresaka tamin'izy ireo na iray aza momba ireo olana ireo sy ny ahiahiny hoe miorina any amin'ny tanàna haolon'ireo foibem-paritra sady tsy misy fianarana sy hôpitaly sahaza ireo trano atolotry ny fanjakana. Efa nanamarika toe-piainana any amin'ny toerana toy izany ny famoahana an-tambajotra toy ny EurasiaNet, nanamarika fa matetika tsy ampy varavarankely sy ireo filàna fototra toy ny rano, herinaratra ary entona ilay trano vaovao.
Vokatr'izany, nanokatra vondrona Facebook antsoina hoe One night in a tent with IDPs (Alina iray ao an-tranolain'ireo nafindra toerana) ny blaogera Besik Liparteliani sy David Chikhladze, izay nahasintona olona 387 tao anatin'ny herinandro.
Isanalina, eo amin'ny blaogere 3-5 eo no matory miaraka amin'ny IDP ao anaty tranolay. Mitondra sakafo, akanjo ary fanafody miaraka aminy izy ireo, manoratra ny fomba fijeriny ary mizara izany an-tambajotra rehefa mody.
Zeorziana blaogera any amin'ny tranolaina IDP any Tbilisi, Zeorzia. Avy amin'ny http://gabo.ge/archives/1294
Hatreto, nasehon'ireo haino aman-jery an-tambajotra fotsiny aloha ny firaisankinan'ireo blaogera, miaraka amin'ny Netgazeti [GE] mamerina mamoaka matetika ny fomba fijerin'izy ireo, Liberali [GE] manasongadina izany, ary ilay fahitalavitra lehibe amin'ny aterineto itv.ge, mitatitra izany an-dahatsary [GE].
Manoratra ny iray amin'ireo blaogera tafiditra tao anatin'ilay hetsika, Lilac.ge [GE]:
Efatra volana izay no toy izao. Miaina tsy misy tafo izy ireo no sady tsy mahafantatra ny fotoana hitsaharan'izao. Indraindray tena noana mafy izy ireo raha ireo mpiasan'ny ministera kosa mandalo miaraka amin'ny sakafo eny an-tanany. Tsy ampy hazo (mba ho dorana hanafanany ny tenany izy ireo) ary misitrika ao amin'ny tranolain'izy ireo ny orana raha toa ka milaza aminy ny Minisitra ”tsy maninona izany, tsy dia mangatsiaka loatra anie ny ririnina eh.”
Eny tokoa, manoratra mikasika ny trangana vehivavy iray namono tena noho ny hakiviana ny Gabo.ge [GE] .
Nandritra ny efatra volana, vaovao kely no naparitaka momba ity hetsi-panoherana ity. Tsy miraharaha izany ny haino aman-jery, na eo aza ny zava-misy hoe nisy ny fahafatesana iray. Noho ny tsy tsy firaharahana ataon'ireo manampahefana, nandoro ny tenany tao amin'ny tokontanin'ny minisitera ny vehivavy iray ary maty 25 andro taorian'izay.
Manoratra momba ny toe-piainan'ireo IDP koa ny blaogera Tiko Gabunia [GE] .
Misy IDP iray kilemaina ao. Tsisy tongotra noho ny ady izy ary lehilahy iray manana vy ho solon'ny taolany ao amin'ny tongony (milaza ny sasany fa fonosiny harona plastika izany ary ataony anaty poketra mba tsy hangatsiaka amin'ny alina). Tsy misy anaty toe-piainana mahafinaritra na iray aza amin'izy ireo, fa ny sasany mbola ratsy [kokoa noho ny hafa]. Hitanay tamin'ny alina fa nitete avokoa ireo tranolay rehetra, tsy misy sakafo, mila fitaovana ho amin'ny fikarakarana manokana sy fidiovana, ary hazo (ndao hanampy azy ireo amin'izay zavatra azontsika atao).
Manoratra momba ny hakiviana sy ny fahaverezam-panantenana ao amin'ilay toby ho an'ny IDP ny Vakhushti Menabde [GE].
Efa ora maro izay no lasa hatramin'ny nahatongavanay tety ary ny fahaverezam-panantenana no zavatra voalohany tsikaritro. Tsy inoan'ireo IDP hoe misy olona miraharaha azy any ho any. Isanandro, mahita ny fihetsika tsy azo atokisana ataon'ny mpiasan'ny ministera izy ireo (izany hono) ary malahelo noho ny tsy fitsidihan'ny haino aman-jerim-pirenena azy ireo. Roa herinandro lasa izay no nahitanay ny momba azy ireo, fa efa efatra volana izy ireo no tety. Tsy mino ireo fikambanana momba ny zon'olombelona sy iraisam-pirenena intsony izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, tsara homarihina fa tamin'ny faran'ny taona 2008 nandritra ny fivoriamben'ireo mpitondra fanomezana tany Bruxelles, 4,5 lavitrisa dolara no voaangona, ka ny 74,5 tapitrisa eoro (102,7 tapitrisa dolara) no natao ho an'ny fampiantranoana ireo olona nafindra toerana. Nanome 51 tapitrisa euro (70,3 tapitrisa dolara) tamin'ny fahavaratra 2009 ihany koa ny Kaomisiona Eoropeana ho an'ny fampiantranoana maharitra ireo IDP. (loharano). Namoaka fanambaràna mandrisika ny fanjakana Zeorzia mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fanesorana olona ihany koa ny Amnesty International.
Hanohy ny fandrakofana ilay hetsi-panoherana ny Global Voices ary ho zaraina tsy ho ela ireo fanavaozana.